नवदुर्गा गाउँपालिका वडा न. ४ को वडा अध्यक्ष पदमा टेक वहादुर साउदको दाबी - satkar post
डडेल्धुरा ६ बैशाख : डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा न. ४ को वडा अध्यक्ष पदमा टेक वहादुर साउदले दाबी गरेका छन। विगत १० वर्षदेखि राजनीति तथा सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका उनले आफू नै नवदुर्गा वडा न. ४ काे वडाअध्यक्ष पदमा उपयुक्त उम्मेदवार हेको दाबी गरेका हुन्।
उनी गत स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराबाट नवदुर्गा गाउँपालिका वडा न. ४ बाट स्वतन्त्र वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार रहेका थिए। उनले गत स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फ आधिकारी उम्मेदवार भन्दा भारी मत ल्याएका थिए । विभिन्न सामाजिक कार्य गरेर जिल्लामा छुट्टै पहिचान बनाएका साउद २०६७ सालदेखि नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका क्रियाशील छन। नवदुर्गाका थुप्रै समस्या देखेका उनले वडा अध्यक्षमा विजयी भएपछि समाजिक तथा आर्थिक विकासमा कदम चाल्ने बताएका छन।
महिला, बालबालिका, दलित, विपन्न, आदीवासी जनजाति र वृद्धवृद्धाको अधिकारका सवालमा दत्तचित्त भएर लाग्ने उनले दाबी गरेका छन्। ‘अहिले जिल्लाका विभिन्न स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेको साउदकाे भनाई छ। नेपाली कांग्रेसले नवदुर्गा गाउँपालिकामा गठवन्धन गरे म गठवन्धनकाे विरुद्ध मा वडा अध्यक्ष पदमा लडछु। नवदुर्गामन रहेका तमाम प्रकारका समस्या, चुनौति, अवसर र सम्भावनासँग नजीकबाट परिचित रहेकोले टिकट पाएर विजयी भएमा सरकारी काेष बाट प्राप्त
सेवासुविधा नलिने योजना समेत बनाएको उनले बताएका छन।
डडेल्धुरा,१५ असार : त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघको मंगलबार सम्पन्न निर्वाचनमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन समर्थित प्रजातान्त्रिक वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई पराजित...